Hlola iJamaica - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu e-Jamaica.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseJamaica
Bukela ividiyo ekhuluma ngeJamaica
Hlola iJamaica, isizwe esiqhingini e I-Caribbean, etholakala eningizimu yeCuba nasentshonalanga yesiqhingi saseHispaniola. Ngabantu abayizigidi ezingama-2.8, iJamaica izwe lesithathu elinabantu abaningi kakhulu kuma-Anglophone emazweni aseMelika, ngemuva I-united states futhi Canada. Ihlala ingumbuso weCommonwealth neNdlovukazi u-Elizabeth II njengeNhloko Yezwe.
IJamaica inabantu abaningi abangamaNdiya baseChina nabaseMpumalanga. Amanani amakhulu amaWhite namaMulatto, nabantu bendabuko yaseSyria / yaseLebanon, iningi labo elixhume izizukulwane ngezizukulwane. Abantu esiqhingini kuyaqabukela babe ngeqembu elilodwa lobuhlanga njengoba amaJamaican ehlanga oluxubile eyiqembu lesibili ngobukhulu; izimpande zofuzo zabantu abaningi zingalandelelwa ngemisuka engabonakali kangako ngokomzimba. UbuKristu yinkolo enkulu kulesi siqhingi.
Izinsizakusebenza zaseJamaica zifaka ikhofi, ipapaya, i-bauxite, i-gypsum, i-limestone nomhlanga.
Abantu bomdabu base-Arawak naseTaino abasuka eSouth America bahlala esiqhingini esiphakathi kwe4000 ne1000BC.
IJamaica yayihlalwa amaNdiya angama-Arawak ngenkathi uColumbus eyihlola e1494 wayiqamba ngokuthi iSt Iago.
Isimo sezulu saseJamaica sishisayo, sinesimo sezulu esishisayo nesinomswakama, sisekela imvelo ehlukahlukene ngokunotha kwezitshalo nezilwane.
Izintaba ezihlaza okwesibhakabhaka
Ungafika ngendiza lapho
Isikhumulo sezindiza iNorman Manley International eKingston.
Isikhumulo sezindiza i-Donald Sangster International eMontego Bay.
Zombili lezi zindiza zithola inqwaba yezindiza zomhlaba wonke nsuku zonke. Kunezikhumulo zezindiza ezincane eNegril nase-Ocho Rios nakwezinye ezincane Kingston, engatholwa yindiza encane, yangasese.
Yize bonke abantu baseJamaic bekwazi ukukhuluma isiNgisi, okuwulimi olusemthethweni, bavame ukuba nezitatimende ezinamandla kakhulu kanti nabezinye izizwe bangakuthola kunzima ukukuqonda lokhu. Amanye amaJamaican akhuluma kancane kwezinye izilimi ezidumile njengeSpanishi.
Vakashela ku-Nine Mile lapho azalelwa khona uBob Marley futhi manje angcwatshwa khona Uhambo olukhuphukela ezintabeni lukuvumela ukuba ubone inhliziyo yezwe. Uma ukhetha, qasha umshayeli wangasese noma uhambo oluncane lweveni. Uzokwazi ukuma futhi uvakashele izitolo ezincane eziseduze nesikole njengoba ungena edolobhaneni. Abantu banobungane, futhi bakhulunywa kahle. Uma umane nje ufuna ukubona uBob Marley's, thatha ibhasi elihle elinomoya opholile bese ushaywa masishane eceleni kwekhampasi. Vele uqiniseke ukuthi uvakasha.
Chitha usuku e-Negril 7 miles beach bese uqedela eRick's Cafe ekushoneni kwelanga okumangalisayo futhi ubuke nokuhle kakhulu kwe-cliff diving.
IDunn's River Falls kumele uyibone futhi uyenze uma uvakashela iJamaica. Itholakala e-Ocho Rios. Ukuwa kwe-600 ezinyaweni ezokwehla kuhle kakhulu. Empeleni ungakhuphuka uze ufike phezulu ekuweni. Kungokuhlangenwe nakho okumangazayo! Izame uma uzama inselelo ethokozisayo
Intaba iMystic ine-bob-sledding ride ehlanganiswa nezinketho ze-zip lining, isilayidi samanzi kanye nethilamu yomoya. I-tram yomoya iyindlela ehamba kancane yokufunda nge-canopy yehlathi.
I-Hiking Hiking, ukukhempa, ukudoba, ukugibela igalofu, ukugibela amahhashi, ukugibela amahhashi, ukubhukuda, ukushushuluza i-jet, ukudonsa kwe-scuba, ukushaya i-kite, ukuvakashela indlu yaseGiddy, ukuphuza nokubhukuda namahlengethwa.
I-Villagev Rose HALL, I-RHYNE PARK VillAGE.
Idola laseMelika lamukelwa kabanzi ezindaweni ezivakashelwa kakhulu abavakashi. Ngempela, wonke amahhotela, izindawo zokudlela eziningi, izitolo eziningi, futhi cishe konke ukuheha emadolobheni amakhulu kuzokwamukela idola laseMelika.
Hlala njalo usesikhathini ngamanani okushintshana futhi uphathe umshini wokubala. Ezinye izindawo zingazama ukukwenza ukuthi ukhokhe imali ephindwe kayishumi uma ukhokha ngamadola aseMelika. Izindleko zokuhlala eJamaica ziqhathaniswa ne-United States.
Amakhadi wesikweletu afana ne-VISA, i-MasterCard kanye nangezinga elincane i-American Express ne-Discover ayemukelwa ezikhungweni eziningi zebhizinisi, njengezitolo ezinkulu, amakhemisi kanye nezindawo zokudlela e- I-Kingston, IMontego Bay, iPortmore, i-Ocho Rios neNegril namanye amadolobha amakhulu. Okuhlukile ukubona iziteshi zikaphethiloli ezidinga ukheshi kakhulu.
Ama-ATM abizwa ngama-ABM eJamaica futhi atholakala kuwo wonke amakholwa.
Ukudla kweJamaican kuyingxube yezitsha zaseCaribbean nezitsha zasendaweni. Yize ukudla kwaseJamaican kudume ngokuba yisinongo, ukuthambekela kwendawo kuncike ekudleni okuhlukahlukene okuhlukahlukene. Ezinye ze I-Caribbean izitsha ozozibona kwamanye amazwe azungeze isifunda irayisi nethanga (okuphekwe ngobisi lukakhukhunathi) nama-patties (abizwa ngokuthi ama-empanadas emazweni akhuluma iSpanishi). Isitsha sikazwelonke yi-Ackee ne-codfish, futhi KUFANELE zivivinywe yinoma ngubani ovakashela lesi siqhingi Yenziwa ngesithelo sendawo esibizwa nge-Ackee, esibukeka njengamaqanda aqhekeziwe, kepha sinambitha esiyingqayizivele sawo kanye nokhakhokho owomile oxutshwe anyanisi notamatisi. Ngeke uthole ithuba lokuzama lokhu kudla kwenye indawo, futhi uma ufuna ukusho ukuthi wenze okuthile okuhlukile kuJamaican, leli yithuba lakho.
Okunye ukudla kwasendaweni okubizwa ngokuthi yi-bammy, empeleni okwasungulwa amaNdiya angama-Arawak (Taino). I-pancake eluhlaza elucwathi enamakhanda evame ukudliwa ngezikhathi zokudla kwasekuseni ngalolo hlobo lokunambitheka okufana nesinkwa sombila. Kukhona futhi nesinkwa esinezinhlama ezinzima, esiza ngazo zombili izinhlobo ezisikiwe nezingenakusikwa. Zama ukuyifaka i-toast, ngoba lapho i-toasted, inambitheka kangcono kunesinkwa esiningi oyoke usidle. Uma ufuna izitsha ezinenyama eningi kuzo, ungazama ukudla okunambitheka kwejerk. Okuthandwa kakhulu yinkukhu yejezi, yize i-jerk ingulube nejerk conch nakho kuvamile. I-jerk isithokelo yi-spice esatshalaliswa enyameni ku-grill efana ne-barbeque sauce. Khumbula ukuthi iningi lamaJamaic lidla ukudla kwalo lenziwe kahle, ngakho-ke lindela ukuthi ukudla kuzomiswa kancane kunokujwayela. Kukhona futhi ama-curries afana nenkukhu egobile kanye nembuzi egobile edume kakhulu eJamaica. Imbuzi egobile kakhulu yenziwa ngezimbuzi zesilisa futhi uma ubona imenyu enezinhlanzi ezigobile, yizame.
Ungase uthande ngisho nokuthatha ucezu lukamoba, usike izingcezu ezithile bese uncela kuzo.
Izithelo nemifino eJamaica ziningi, ikakhulukazi phakathi kuka-Ephreli noSepthemba, lapho iningi lezithelo zasendaweni zisesizini. Izinhlobo eziningi zemango 'kumele ube nazo' uma uvakashela phakathi nezinyanga zasehlobo. Uma ungazange unambitha izithelo ezivuthiwe esihlahleni, khona-ke ulahlekelwe. Zama ukuphuza 'ukhukhunathi wamanzi' ngqo kuphume kakhukhunathi. Lokhu akufani nobisi lukakhukhunathi. Amanzi kakhukhunathi acacile futhi ayaqabula, ingasaphathwa eyokuthi inezinzuzo eziningi zezempilo. Ama-pawpaws, ama-apula ezinkanyezi, ama-guinep, uphayinaphu, i-jackfruit, amawolintshi, ama-tangerine, izithelo ze-ugli, noma ama-oranoques ngezinye nje zezinhlobonhlobo zezithelo ezitholakala lapha.
Izithelo nemifino yasendaweni ekhulile ayibizi. Izivakashi zingathola ukuthi umkhiqizo ongeniswayo onjengama-apula aseMelika, ama-sitrobheli, amaplamu njll. Uthande ukubiza kakhulu kunasemazweni asekhaya. Amagilebhisi ikakhulukazi avame ukubiza kakhulu esiqhingini.
Ukudla kwamaShayina kuyatholakala ezindaweni eziningi ezitolo zamaShayina zokuthathwa futhi kunokunambitheka okuhlukile kweJamaican.
Ekugcineni, kunesigaba sokudla “okuthandayo”, isizinda sokuzijwayeza amaRastafarians, abalandela imihlahlandlela eqinile yokudla. Lolu hlobo lokudla lukulungiswa ngaphandle kokusetshenziswa kwenyama, uwoyela noma usawoti, kepha lusenganambitheka ngenxa yokusebenzisa ezinye izinongo. Ukudla oku-ital akuvamile kumamenyu aphrintiwe ezindaweni zokudlela eziphezulu zabavakashi futhi kutholakala kuphela ngokuya ezindaweni zokudlela ezikhethekile. Kungadingeka ukuthi ucele ukuzungeza ukuthola isizinda esisebenzisa ukudla kwase-Ital njengoba kungejwayelekile kakhulu.
Kukhona iziphuzo eziningi eJamaica. Kungatholakaliswa amazinga afana noPepsi noCoca-Cola, kepha uma ufuna ukuphuza usawoti wasendaweni, ungazama iBigga Cola, iChampagne cola noma i-grapefruit soda ebizwa nge- “Ting” kanye nobhiya kaGinger. Futhi, zama noma yiluphi usawoti owenziwe yi-Desnoes & Geddes, ngokuvamile obhalwe ngokuthi "D&G." I-Cola champagne "ne" uphayinaphu "ukunambitheka okudumile ongeke ukuthole kwenye indawo. Kusukela ekuqaleni kwalelikhulu leminyaka, iningi leziphuzo ezithambile zithwalwa ngopulasitiki esikhundleni sengilazi. Ungazama i-lager yendawo ebizwa ngeRed Stripe (ethunyelwa emazweni amaningi entshonalanga, ngakho-ke kukhona ithuba elihle lokuthi usuyinambithile) kanye ne-Dragon Stout. Amabhiya amaningi angatholakala kuma-Jamaican pubs nasemahhotela. Isiphuzo esinzima sendawo yiJamaican Rum, eyenziwe ngomoba. Ngokuvamile kuvame ukuba ngaphezu kobufakazi futhi kudakwe nge-cola noma ijusi yezithelo. CABANGANI NGOKUQINISA! Ayenzelwe umuntu oyiphuzayo okokuqala. Akuzwakali ukuthi une-150 proof Jamaican Rum. Njengoba iJamaica yayikoloniwe yiBrithani, imithetho yokuphuza iyi-18 futhi idlulile, kepha ngokuvamile ayikuvumeli ngamandla njengoba kungaba njalo emazweni aseNtshonalanga.
IJamaica inezinga lokubulala eliphakeme kakhulu le-5th emhlabeni. Njengakwelinye izwe langaphandle, uma kwenzeka kuphakama isimo esiphuthumayo, ikakhulukazi ezingeni lasekhaya, kuyalulekwa ukuthi uxhumane nenxusa lakho likahulumeni noma i-nxusa lakho. Ohulumeni bavame ukweluleka abahambi abahlala ezweni isikhathi esengeziwe ukwazisa ngamanxusa abo noma ihhovisi labo ukuze bathintane uma kunesimo esiphuthumayo.
Septhemba, Okthoba, noNovemba banesibalo esiphansi sabavakashi ngenxa yesikhathi sesiphepho. Ngenxa yalokhu, amaphoyisa akhuthazwa ukuba athathe iholide lawo ngalesi sikhathi. Lokhu kwehliswa kwamandla embutho wamaphoyisa kungenza izindawo ezifana neMontego Bay's strip ye-hip ibe yiphephe kakhulu kunendlela evamile ngayo.
Amanzi ompompi ngokujwayelekile alungile futhi aphephile ukuwaphuza. Wonke amanzi apayipiwe eJamaica aphathwa ngamazinga omhlaba, futhi azoba sezingeni elifanayo ongalilindela ukuthola eNyakatho Melika noma eYurophu. Inkonzo yamanzi ezindaweni zasemakhaya kwesinye isikhathi ingaphuma amahora amaningi ngasikhathi.
Abantu abaningi baseJamaican baphana kakhulu futhi banemfudumalo. Ukubuyisa lokhu kufudumala nobungane kuyindlela enhle yokubakhombisa ukuthi uyalazisa izwe labo lapho ubuka iJamaica.